असार ९ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल | राशिफल
June 23, 2021 NepstokLeaveaComment on असार ९ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) अरुको कुरामा बिशेष ध्यान नदिनु होला । मनमा कुबिचारले बास गर्नाले भोलिको समयमा केहि झन्झज पर्न सक्छ । खर्चको योग रहेको हुनाले लगानिमा ध्यान दिनु होला । बौधिक ब्यत्तित्व सगँको भेटघा’टमा समय ब्यतित रहने छ । खानपा’नका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) ब्यापार ब्यवसाय’को निम्ति राम्रो समय रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षामतामा बृद्यि हुनेछ । मित्रजनह? बाट साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । सामान्य यात्रा रहन सक्छ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । कार्य धैर्य’ताका कारण पद प्रतिष्ठामा बृद्धिको योग रहेको छ ।
मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) अ?को छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामा’न्य धोका हुन सक्छ । अ?को सहयोग निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । कुरा काट्रने ब्यक्ति ह?को बृद्यि हुनेछ । शत्? सबल रहलान । स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउला । नयाँ लगानि तथा साजेदा’रीकार्यका क्षेत्रमा भने उत्तम समय रहनेछ ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) मनोरञ्जनको क्षेत्रमा धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । सामान्य आम्दानि हुनसक्ने सम्भा’बना रहेको छ । मित्र जन को साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले गर्दा मन प्रशन्न रहला ।मन प्रशन्न गराउने समाचार प्राप्त रहनेछन । अध्यन अध्याप’नका सन्दर्भमा खर्चिएको समय उत्तम रहनेछ ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगले मन प्रशन्न रहला । पारीवारि’क साथ सहयोग बाट काममा बिशेष फाईदा हुनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । श्रम परीश्रमको कदर नहुनाले मनमा सामान्य चिन्ता हुनेछ । सामान्य कार्य सम्पा’दनमा अधिक परीश्रको सम्भाबना रहेको छ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) खानपान मा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । कामको क्षेत्रमा भने साधारण झन्झट तथा अप्ज’स सहनु पर्ला । दाजु भाई बिचको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । आय आम्दानि मा बृद्यिहुने योग रहेको छ । सामान्य यात्रा पस्चात मान सम्मान’को प्राप्ती हुन सक्नेछ ।
तुला राशि (र, रि, ?, रे, रो, ता, ति, तु, ते) मान प्रतिष्ठामा बृद्यि हुने योग रहेको छ । कुल’कुटुम्ब ह?को साथ सहयोग राम्रो प्राप्त हुनेछ । खानपानमा बिशेष ?चि रहने छ । मधुर बाणीका कारण बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा भने समय मध्यम रहनेछ । अध्यन अध्या’पनमा समय मध्यम रहनेछ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) मान्यजनको भेटघाट बाट मन प्रशन्न रहला । मित्रजन तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार रहने छ । सामान्य यात्राको सम्भा’बना रहन सक्छ । कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्झट ब्यहोनु पर्ला । आँट र शाहासको बृद्यि हुनेछ । ब्यापार ब्यव’साय मा भने सामान्य ढिलाईको सम्भाबना रहेको छ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) बिश्वासिलो ब्यक्ति बाट धोकाहुनाले गरिर’हेको काममा बिशेष झमेला पर्न सक्छ । कुराकाट्ने ब्यँितह? को कारण सामान्य चिन्ता बढ्न सक्छ । दाम्पति बिच सामान्य कलह रहने सम्भा’बना रहन सक्छ । आय आर्जनका लागी भने समय उत्तम रहेको छ । साझेदारी कार्यको क्षेत्रमा अघि नबढेको नै राम्रो हुनेछ ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) मित्रजनह? बाट साथ सह’योग प्राप्त हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले गर्दा मन प्रशन्न रहला । यात्रा फाईदा मुलक हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । सामान्य स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउन सक्छ । गैर ब्यक्तिको पुर्ण बिस्वास नर्गनु राम्रो हुनेछ । कुराकाट्ने ब्य’तिह?बाट बच्नु पर्ने छ ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) कार्यसम्पादनमा झन्झट हुनाले ‘मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । परीबारका कोहि सदस्य ह?को स्वास्थ क्षेत्रमा झमेला पर्न सक्छ । बौधिक बिकास तथा विद्या प्राप्ति योग रहेको । कार्यक्षेत्रको लगन सिल’तामा बृद्धि हुनाले मान सम्मानको योग रहेको छ । समय मध्यम रहनेछ ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) मनोरञ्जनको निम्ति धेरै स’मय ब्यतित हुन सक्छ । श्रम परीश्रमको राम्रो कदर हुने समय रहेको छ । सबारी साधन को प्रयोगमा ध्यान दिनु होला सामान्य झन्झट रहन सक्छ । शुभचिन्त’कह?को साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । सामान्य कार्य सम्पादनमा अधिक परीश्र गर्नु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।
सोमबार : यस मन्त्रद्वारा भगवान शिवको पूजा गर्नुहोस, हुन्छ मनोकामना पुरा
एकाविहानै सच्चामनले मनकामना माताको दर्शन गरि आज जेष्ठ ३१ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् !